Myanmar IT Resource Forum » WEB DEVELOPERS ZONE » » Hypertext Markup Language » လွယ်ကူလေ့လာသင်ခန်းစာ [Tutorial]
1 လွယ်ကူလေ့လာသင်ခန်းစာ [Tutorial] on 28th September 2009, 1:56 pm
လွယ်ကူလေ့လာ HTML သင်ခန်းစာ
HTML နဲ့ ပါတ်သက်ပြီးတော့ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ မြန်မာလို Tutorial တွေလည်း ထွက်ရှိပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ရေးထားတာတွေမှာ လိုအပ်နေတာလေးတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ကျနော့်အနေနဲ့ ဒီနေရာမှာ အဲလို စာအုပ်တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်း ဖြည့်ရင်းနဲ့ ကိုယ်သိသလောက်လည်း မျှဝေရင်း HTML အကြောင်းရေးကြဖို့ စိတ်ကူးမိပါတယ်။
အရင်ကတော့ ဖိုရမ်ထဲမှာဘဲ ကိုဧပရယ်ကောင်လေး စထားတဲ့ Topic တစ်ခုရှိတယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့် လုပ်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်က အဲလိုမဟုတ်လို့ ခွဲထုတ်လိုက်တာပါ။
ဒီနေရာမှာ ကျနော်လိုချင်တာက ပုံမှန်ရေးနေကြ Tutorial တွေ စတိုင်လိုမျိုး တစ်ယောက်ထဲက ရေးသွားတာမျိုး မလိုချင်ပါဘူး။ အားလုံး ပေါင်းစည်းပြီးတော့ ဆွေးနွေးပေးသွားတာမျိုး ၊ တစ်ယောက် လိုအပ်ချက် တစ်ယောက်က ဖြည့်ပြောပေးသွားတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ဆွေးနွေးကြပါမယ်။
ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဆွေးနွေးပေးမှာ ဖြစ်သလို MITR အဖွဲ့သားများ အနေနဲ့ လည်း ဆွေးနွေးပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ HTML အပိုင်းဆိုတော့ လွယ်လည်း လွယ်လို့ သိတဲ့ သူတော်တော် များတဲ့ အတွက် ၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေးနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Batch File Programming တုန်းကလိုတော့ ကျနော်တစ်ယောက်ထဲ မရေးတော့ဘူးနော်။ သိတဲ့သူက ၀ိုင်းရေးပေးကြဦး။ တော်တော်လေး စုံလာတော့မှ PDF ပြောင်းကြတာပေါ့။
အားလုံးက ၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေးကြမယ့် ပုံစံနဲ့ ရေးမှာဖြစ်တဲ့ အတွက် ဟိုရောက်ဒီရောက် မဖြစ်ရလေအောင် ရေးမယ့် သင်ခန်းစာခေါင်းစဉ် အစီအစဉ်တွေတော့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ဘာအကြောင်းပြီးရင် ဘာလာမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။ သင်ခန်းစာ (၁) ၊ (၂) စသည်ဖြင့် အရင် သတ်မှတ်ကြတာကောင်းပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီ့လိုမှ သင်ခန်းစာ (၁) ကို ကျနော်ကနေ စဆွေးနွေးတယ်ဆိုပါတော့ ၊ အဲဒီ့ သင်ခန်းစာ (၁) မှာ ကျနော် ပြောသွားတာ လိုနေတယ်ဆိုရင် နောက်လူတွေက ၀င်ပြော ၊ ဖြည့်ပြောကြပါမယ်။ သင်ခန်းစာ (၁) ရဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ တော်တော် စုံပြီဆိုရင် ၊ နောက်ထပ် တစ်ခန်းကို အဆင်သင့်တဲ့ သူက အရင်တင်သွားပါမယ်။ အဲဒီ့ တင်သွားတဲ့ သူရဲ့ ဆွေးနွေးချက်မှာ လိုနေတာကိုမှာ ကျန်တဲ့သူတွေက ထပ်ဖြည့်ကြပါမယ်။
အဲလိုသာ ပုံမှန် လုပ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့ HTML စာအုပ်တစ်အုပ် ရရှိလာမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ Tutorial တစ်ခုကို ခေါင်းတစ်ခေါင်းထဲက ထုတ်ပြီးတော့ ရေးမယ့်အစား ၊ခေါင်းတွေပေါင်းပြီး ရေးကြမှာပါ။ ဒါကတော့ ကျနော် လုပ်ချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပါ။ ကျနော့် ရည်ရွယ်ချက် အကောင်အထည်ပေါ်ပြီးတော့ ဖြစ်မြောက်လာအောင်ကတော့ MITR အဖွဲ့သားတွေနဲ့ အများကြီး သက်ဆိုင်နေပါတယ် ခင်ဗျာ။
ပထမအဆင့်အနေနဲ့ သင်ရိုးမာတိကာ သတ်မှတ်ကြပါမယ်။
ကျနော်က စပြီးတော့ သတ်မှတ်ကြည့်ပါ့မယ်။ လိုအပ်တာ ရှိကိုရှိမှာပါ။ ဖြည့်စွက်ပေးကြပါ။
ခေါင်းစဉ်ကြီးအောက်မှာတော့ အဲဒီ့ သင်ခန်းစာ တစ်ခုမှာ ယေဘုယျအားဖြင့် ပါ၀င်နိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေပါ။
ခေါင်းစဉ်ကြီးကို လည်း အတည်တကျ သတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်။ ကျနော် စာအရေးအသား ၊ ခေါင်းစဉ်ပေးတာတွေ အကုန် ညံ့တယ်။ ကျနော်က လိုချင်တာကို ရောက်အောင်ဘဲ ရေးထားတာ။
ခေါင်းစဉ်တွေကို ထိထိမိမိနဲ့ တိုတိုလေး ဖြစ်အောင် ပြင်ပေးပါဦး။ ပြီးတော့ လိုနေတာတွေလည်း ဖြည့်ပေးကြပါဦး။
.......................$ƴǩǾ ၏ HTML နှင့် ပတ်သက်သော သင်ရိုးမာတိကာ.....................
သင်ခန်းစာ (၁) ။ ။ HTML မိတ်ဆက်
HTML ဘယ်ကနေ ဘယ်လို ပေါ်ပေါက်လာတာ။ HTML ဆိုတာ ဘာ။ HTML နဲ့ ဘာတွေလုပ်လို့ရတယ်။ ယနေ့ခေတ်မှာ HTML ကို ဘာကြောင့်အသုံးပြုသေးတယ်။ HTML ကို ဘယ်လို Tools တွေ သုံးပြီးတော့ ရေးနိုင်တယ်။ HTML ရဲ့ Concept ၊ Webpage တစ်ခုရဲ့ ယေဘုယျအားဖြင့် ရှိနိုင်တဲ့ Structure ၊ HTML ရှိသလို XHTML ရှိတဲ့အတွက် သူတို့ ၂ ခုရဲ့ ကွာခြားချက်။ သူတို့ ၂ ခုလုံးရဲ့ ရေးသားပုံ Syntax ။
သင်ခန်းစာ (၂) ။ ။ HTML ရေးရာတွင် မပါမဖြစ်ပါလေ့ရှိသော code များ
html ဆိုတာ? blockquote ဆိုတာ? body တို့ header တို့ဆိုတာ? br နဲ့ div ဆိုတာ? h1 ကနေ h6 အထိ က ဘယ်နေရာမျိုးမှာ သုံးတဲ့ ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေဆိုတာ? hr ဆိုတာက?
အဲဒါတွေ အကြောင်းအသေးစိတ်နဲ့ သုံးပုံသုံးနည်းများကို ရေးသားကြပါမယ်။
သင်ခန်းစာ (၃) ။ ။ HTML ရေးရာတွင် ထိပ်ဆုံး၌ ပါလေ့ရှိသော code များ
base? link? meta? script? style? title? စတာတွေ အကြောင်းအသေးစိတ်ဆွေးနွေးကြပါမယ်။
သင်ခန်းစာ (၄) ။ ။ List လုပ်ရာတွင် သုံးလေ့ရှိသော code များ
dl? dd? dt? dir? li? menu? ol? ul? စတဲ့ Code တွေ အကြောင်းဆွေးနွေးကြတာပေါ့။ ကျနော် မသိလို့ ကျန်နေတာတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။
သင်ခန်းစာ (၅) ။ ။ စာသားများ၏ Format တစ်ခုခုကို သတ်မှတ်ပေးချင်လျှင်သုံးလေ့ရှိသော code များ
a, abbr, acronym, address, b, basefont, bdo, big, blink, center, cite, code, comment, del, dfn, em, font, i, ins, kbd, marquee, nobr, noscript, plaintext, pre, q, rb, rbc, rp, rt, rtc, ruby, s, samp, small, span, strike, strong, sub, sup, tt, u, var, wbr, xmp
စသော မကုန်မခမ်းနိုင်သော Text Formatting နဲ့ သက်ဆိုင်တာတွေ အကြောင်းဆွေးနွေးပါ့မယ်။ ကျန်သေးရင် လည်း ဖြည့်ပေးသွားဦးနော်။
သင်ခန်းစာ (၆) ။ ။ Form တစ်ခု တည်ဆောက်ရင် သုံးလေ့ရှိသော Code များ
button, fieldset, form, input, isindex, label, legend, optgroup, option, select, textarea
ဒီအခန်းမှာ စတာတွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးကြပါ့မယ်။
သင်ခန်းစာ (၇) ။ ။ Media ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ပတ်သတ်သော Code များ
ဒီအခန်းမှာ ဓါတ်ပုံများ ၊ သီချင်းများ ထည့်ချင်ရင် သုံးလေ့ရှိတဲ့ Code တွေကို ရှင်းပြကြပါမယ်။
အဲဒါတွေထဲမှာ applet, area, bgsound, embed, img, map, noembed, object, param, တွေလည်းပါမယ်ထင်ပါတယ်။ လိုတာရှိရင် ဖြည့်ပေးပါ။
သင်ခန်းစာ (၈) ။ ။ Table တည်ဆောက်ရင် သုံးလေ့ရှိသော Code များ
သင်ခန်းစာ (၉) ။ ။ Frame နှင့်ပတ်သက်သော Code များ
frame, frameset, iframe, noframes စတာတွေ ပါလာပါလိမ့်မယ်။
သင်ခန်းစာ (၁၀) ။ ။ ကျန်ရှိသည့် အခြား Code များ
id, lang, onblur, onchange, onclick, ondblclick, onfocus, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onload, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, onreset, onselect, onsubmit, onunload, style
စတာတွေကို ဆွေးနွေးသွားပါ့မယ်။ အခြား code များဟု သာ ဤ အပိုင်းသည် အမည်တပ်ထားရတယ်။ တကယ်တော့ သိပ်မထည့်ပေးချင်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ WebPage ကို Virus အသွင်ဖန်တီးနိုင်တာ ဒီ Code တွေနဲ့ အများဆုံးဖြစ်လို့ပါ။ ဒါပေမယ့် ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့လာနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်လို့ပါ။ လိုနေတာလေးတွေရှိရင်လည်း ဖြည့်ပေးပါဦးနော်။
ကျနော် အခု ပုံစံချလိုက်တာ ၁၀ ခန်းရှိပါတယ်။ ကျနော်လည်း ကိုယ့်ဟာကိုယ် မာတိကာတွေ ကို ဟိုကူးဒီကူးနဲ့ လျှောက်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ နောက်မှ ပြန်ဖတ်မိတယ် တော်တော်ရှည်တာဘဲ ၊ ဒီပုံအတိုင်းဆို တော်တော်ရေးရမှာနော့်။ ဖိုရမ်မင်ဘာတွေအနေနဲ့ ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ ရေးနိုင်ပါ့မလားလို့တောင် စိုးရိမ်မိတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အခု ကျနော် ထုတ်လိုက်တဲ့ သင်ရိုးမာတိကာ တောင်မှ ၁၀ ခန်းရှိနေပြီ။ နောက်လူတွေသာ ထပ်ဖြည့်လိုက်ရင်တော့....
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ပါဗျာ။ မြန်မာလူမျိုးတွေ အိုင်တီပညာကို အခက်အခဲမရှိ မြန်မာလို လွယ်ကူစွာ လေ့လာစေချင်ကြတာ ကျနော်တို့ အားလုံးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပါ.... အဲဒီ့ရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့ စိတ်ရှည်ရှည်ရေးသွားမယ်.... Member များအနေနဲ့ လည်း တက်ကြွစွာ ညီညီညွတ်ညွတ် ပူးပေါင်းဆွေးနွေးသွားမယ် ဆိုရင်တော့ ဒီ Tutorial ဟာ အောင်မြင်စွာပြီးသွားမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ကျနော့် သင်ရိုးမာတိကာ ကို ပြင်ရုံလေး ဖြည့်ရုံလေး မဟုတ်ဘဲနဲ့ လုံးဝမတူသော သင်ရိုးမာတိကာမျိုးကို လည်း လက်ခံပါတယ်။ အဓိကကတော့ သင်ရိုးကို မြန်မြန်ထုတ်ပြီးတော့ မြန်မြန်စပြီးဆွေးနွေးကြဖို့ပါ။
Last edited by $ƴǩǾ on 21st February 2010, 5:28 pm; edited2times in total
2 လွယ်ကူလေ့လာ HTML သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 28th September 2009, 7:02 pm
html ကုတ်ဆိုရင်တော့လာထားပဲ့ သိပ်တော့သိဘူးနော်
3 လွယ်ကူလေ့လာ HTML သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 30th September 2009, 12:43 pm
သင်ရိုးကို ဘယ်သူမှ ထပ်ပြီး Edit လုပ်ချင်စိတ်မရှိကြဘူးလားဟင်။
ဖိုရမ်ထဲကသူတွေ ဘာလို့ Active မဖြစ်ကြတာပါလိမ့်။
4 လွယ်ကူလေ့လာ HTML သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 30th September 2009, 1:55 pm
html တော့ဖြစ်ပါတယ် ..အတတ်နိုင်ဆုံးအချိန်ပေးပြီးဝင်ရေးပေးပါ့မယ် ... မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အိုင်တီဖွံ ့ဖြိုးတိုးတက် ဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ မောင်လေးရဲ ့စေတနာကိုလေးစားပါတယ်ကွယ်
5 လွယ်ကူလေ့လာ HTML သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 30th September 2009, 1:59 pm
ခုလို ဆွေးနွေးပေးမယ့်သူတွေရလာတာ ၀မ်းသာပါတယ်။
ကျနော်တို့ အရင်ဆုံး `သင်ရိုးမာတိကာ´ ကို သတ်မှတ်ကြရအောင်။
အပေါ်မှာ ကျနော်ရေးထားတာလေးကို လည်း ထပ်ဖြည့်ပေးပေါ့။
6 လွယ်ကူလေ့လာ HTML သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 30th September 2009, 2:23 pm
သတ်မှတ်တာကတော့ မောင်လေးပဲလုပ်လိုက်ပါ အောက်ကနေဆက်ဖြည့်ပေးသွားမယ်လေ.. အရင် aprilkglay တို့ရေးထားတဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေတောင်အရမ်းပြည့်စုံနေလို့ ဘာဖြည့်ပေးရမှန်းတောင်မသိတော့တာ .. completement လုပ်ပေးပါ့မယ် အမအားသလောက်ပေါ့နော်
7 လွယ်ကူလေ့လာ HTML သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 30th September 2009, 2:26 pm
ဆွေးနွေးမယ့်သူကသိပ်မရှိသေးတော့ ကျနော်လည်း လူ ရှာကြည့်နေတယ်။
လူစုံလာအောင် နည်းနည်း စောင့်နေလို့ပါ။
8 လွယ်ကူလေ့လာ HTML သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 30th September 2009, 2:33 pm
9 လွယ်ကူလေ့လာ HTML သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 30th September 2009, 5:58 pm
လုပ်လေ ဘယ်တော့ စမှာလဲ ဟင် .. နာလည်း သိသလောက်လေး ၀င်ရေးရအောင်
10 လွယ်ကူလေ့လာ HTML သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 30th September 2009, 6:00 pm
လူတော့ များလာပြီ။ ကျနော်လိုချင်တာက ရောတိရောရာ မရေးဘူးနော်။
သတ်မှတ်ထားတဲ့့ ခေါင်းစဉ်အလိုက်တစ်ခုပြီးမှ တစ်ခုရေးမှာ။
အဲဒါကြောင့် အရင်ဆုံး ခေါင်းစဉ်တွေ သတ်မှတ်မယ်လို့ပြောတာ
11 လွယ်ကူလေ့လာ HTML သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 22nd October 2009, 10:10 am
12 လွယ်ကူလေ့လာ HTML သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 22nd October 2009, 11:42 am
13 လွယ်ကူလေ့လာ HTML သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 31st January 2010, 12:53 pm
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2010-01-30
Table အပိုင်းလေး ရှင်းပြပေးကြပါအုံး :dr
14 လွယ်ကူလေ့လာ HTML သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 31st January 2010, 5:46 pm
15 Re: လွယ်ကူလေ့လာသင်ခန်းစာ [Tutorial] on 1st February 2010, 5:31 pm
16 လွယ်ကူလေ့လာ HTML သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 1st February 2010, 6:29 pm
aqua wrote: ok i see
အင်းလေ နင်ကိုလက်တို့ပြောမှရမယ်ထင်တယ် မေ့တောင်မေ့နေပြီလား
17 လွယ်ကူလေ့လာ HTML သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 10th February 2010, 4:28 pm
ရေးမယ်ဆိုပြီးဘာလို့ မစသေးတာလဲဗျာ လေ့လာခြင်းတဲ့ သူတွေက အမြဲတမ်း ၀င်ကြည့်နေတာ အခုထိမစသေးတော့ အားလုံးကိုယ်စာ ကျွန်တော်ကပဲ ပြောတော့မယ် ကိုယ်လုပ်တဲ့ကိစ္စ ကို အစပြုပြီးပြီးဆိုရင် စသင့်နေပါပြီးနော် အားလုံးက လည်း စိတ်ဝင်းစာစွာနဲ့ စောင့်မျှော်နေပါတယ်
18 လွယ်ကူလေ့လာ HTML သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 11th February 2010, 6:58 pm
ဟုတ်ကဲ့ အပေါ်ဆုံးမှာလည်း $ƴǩǾ ရေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ... အကုန်လုံး စုပြီးတော့ ရေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခု စာအုပ်ကို ရေးမယ့် လူအင်အားကလည်း အရမ်းနည်းနေပါသေးတယ်...နောက်ပြီး ကျွန်တော်ရယ် $ƴǩǾ ရယ် က ကျောင်းသားတွေပါ... ကျောင်းစာတစ်ဖက်နဲ့ လုပ်ပေးနေရတာဖြစ်တဲ့ အတွက်နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်... တတ်သိနားလည်တဲ့သူအားလုံး ၀ိုင်းဆွေးနွေးလို့ လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ... အခု ဟာက အပေါ်ဘက်က $ƴǩǾ ခွဲထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘယ်သူမှလည်း ဝေဖန်အကြံပြုထားတာမတွေ့ရပါဘူး ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တာက အားလုံး ၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပြီးတော့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ပါ... အစပြုပေးပြီးပါပြီ။ ဘာလို့များ active မဖြစ်ကြတာပါလဲ?
19 လွယ်ကူလေ့လာ HTML သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 11th February 2010, 7:17 pm
pooqee wrote: ကိုယ်လုပ်တဲ့ကိစ္စ ကို အစပြုပြီးပြီးဆိုရင် စသင့်နေပါပြီးနော်
ကိုယ်လုပ်တဲ့ကိစ္စ အစပြုပြီးပြီဆိုရင် နောက်က လိုက်တဲ့သူတွေလဲ ရှိသင့်နေပါပြီနော်။
အခုက ဘယ်သူမှမရှိတော့ ကျွန်တော် တစ်ယောက်ထဲလဲ မနိုင်ဘူးလေ။
bat စာအုပ်လည်း လုပ်ပေးရဦးမှာမို့လို့ပါ။
မြန်မာမှာ လူတော်တွေ အများကြီးပါ။ ကျွန်တော်က ဒီလို ခေါင်းစဉ်စပေးတာတောင် ဘာကြောင့်များ တိုင်တိုင်ပင်ပင်နဲ့ စည်းစည်းလုံးလုံး လုပ်ဖို့ လူတွေ မပေါ်လာရတာလဲဗျာ။
အပေါ်မှာ alt ပြောသွားသလိုဘဲ ကျွန်တော်တို့က ကျောင်းသားတွေပါ။ ကျောင်းသားမှ ကျွန်တော်ဆို နောက်နှစ် B.Tech ၀င်ဖို့ ကြိုးစားနေရမယ့် အချိန်ပါ။
အဲဒါကိုတောင် ဘာမှမရတဲ့ Forum အတွက် ၊ သူများတကာတွေရဲ့ ပြဿနာတွေကို အစွမ်းကုန် ကူညီပြီးတော့ လုပ်ကိုင်ပေးနေတာပါ။
အစ်ကို အဲဒီ့လိုပြောလိုက်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကို ကိုယ်ချင်းမစာသလို ဖြစ်နေတယ်ဗျာ။
အစ်ကိုက အဲလိုပြောတဲ့အတွက် ကျွန်တော်လည်း တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူး။
ကျွန်တော်လည်း ဖြစ်နိုင်ရင် ဒီလိုမျိုး စာအုပ်တွေကိုယ်တိုင် ရေး ၊ ကိုယ်တိုင်ထုတ် ၊ ပြီးရင် အမြန်ဆုံး မျှဝေ အဲလိုလုပ်ချင်တာပေါ့။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် အခြေအနေကိုက မဖြစ်နိုင်တာ။
20 လွယ်ကူလေ့လာ HTML သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 11th February 2010, 7:35 pm
pooqee wrote: အားလုံးက လည်း စိတ်ဝင်းစာစွာနဲ့ စောင့်မျှော်နေပါတယ်
အားလုံးက စိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ စောင့်မျှော်နေတယ်ဆိုတာ သိရလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။
တကယ်တော့ စောင့်နေရုံနဲ့မရဘူးလေ။ ကျွန်တော် စပေးထားတာက အားလုံးက ပါ၀င်လာစေဖို့ပါ။
ဖြစ်နိုင်ရင် အစ်ကိုလည်း HTML ENGLISH E-BOOK တစ်အုပ်လောက်ဖတ် ၊ ကျန်တဲ့သူတွေကလည်း တစ်အုပ်စီဖတ်။ ကျွန်တော်ကလည်း ကျွန်တော် သိထားတာကို ပြန်ကြည့်။
ပြီးတော့ ကိုယ်နားလည်ထားတာလေးတွေကို ဒီ Topic အောက်မှာ ကျွန်တော်ချပေးထားတဲ့ မာတိကာအလိုက် ကိုယ်ရတဲ့ အပိုင်းရောက်ရင် လာရေး။
အစ်ကိုတို့လဲ တကယ်လေ့လာဖြစ်မယ်။ ပြန်ပြီး မျှဝေပေးလိုက်ရတော့ ပိုပြီးတော့လည်း မှတ်မိမယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်လဲ အသိပညာ ဖလှယ်ခွင့်ရမယ်။
တကယ်တော့ Knowledge Sharing ဆိုတာ အဲဒါကမှ အစစ်အမှန်ပါ။
မြန်မာတွေ နားလည်နေတဲ့ Knowledge Sharing နဲ့ Forum ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်က အခုချိန်ထိ နားလည်မှုတွေလွဲနေသေးတာကို စိတ်မကောင်းစွာတွေ့နေရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ရေးသွားတာကို လိုက်ဖတ်ပြီး တကယ် တတ်သွားရဲ့လား?
ကျွန်တော့် ရဲ့ Bat သင်ခန်းစာကို ဖတ်ပြီးတဲ့သူတွေကိုလည်း ဒီနေရာကနေ မေးချင်ပါတယ်။
ဘယ်နှစ်ယောက်ကများ ကိုယ်တိုင်စမ်းရင်းနဲ့ တွေ့လာတာကို ပြန်ပြီးလာရှဲကြသလဲ။
ဘယ်နှစ်ယောက်ကများ သေချာမှတ်မိသွားသလဲ။ (သေချာတယ် ဖတ်ပြီး ၁ လလောက်နေရင် မေ့မှာ)
နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ ပြောချင်တာကတော့ Forum ဆိုတာ သူများသိတာတွေ လိုက်ပြီးယူရုံဘဲလုပ်ဖို့လာတာလား?
ကျွန်တော်လည်း အရင်ကတော့ စိတ်ရှည်လက်ရှည် နဲ့ သူများအတွက် လုပ်ပေးပါတယ်။
အခုတော့ စေတနာကို စော်ကားသလို ခံစားလာရပြီဗျာ။
ကျွန်တော့် အနေနဲ့ တကယ်ကောင်းတဲ့ Community တစ်ခုကို တည်ဆောက်ချင်တာပါ။ ဖြစ်လာမယ်လို့လည်း ယုံတယ်။
လိုအပ်နေတာတော့ တစ်ခုဘဲရှိတယ်။ အဲဒါက Community မှာ ရှိတဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့ စုပေါင်းပါ၀င်မှုဘဲ။
အခုလည်း ဒီ Reply ကို မပြန်ဖြစ်အောင် ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် မနည်းထိန်းထားရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်တော့လို့ ကျွန်တော် ခံစားလာရတာကို ပြောဖြစ်သွားပါတယ်။ Personal ပိုင်းထိခိုက်စေလိုခြင်းမပါပါဘူး။ တကယ်ဖြစ်စေချင်တာကတော့ လူတိုင်း Forum, Community ဆိုတာတွေ ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို နားလည်စေချင်တာပါ။
စာကြွင်း။ ။ ဒီ Topic ကို ဘယ်သူမှ ဆက်မရေးလဲ ၄ လပိုင်းမှာ (ကျွန်တော် ပထမ စာမေးပွဲ အပြီးမှာပေါ့) ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အစအဆုံးရေးပေးဖို့ စိတ်ကူးရှိခဲ့ပြီးသားပါ။ အခုက ဘယ်လိုမှအချိန်မရလို့ bat ကိုလည်း စာအုပ်အနေနဲ့ စနစ်တကျမလုပ်ပေးနိုင်သေးပါ။
21 လွယ်ကူလေ့လာသင်ခန်းစာ [Tutorial]ာon 21st February 2010, 5:14 pm
ကဲ... ကျနော် စရေးမယ်... E-Book ပုံစံအတိုင်းရေးပါမယ်။
လိုတာရှိရင် မှားနေရင် ထပ်ဖြည့်ပေးကြပေါ့။ နည်းနည်းချင်းစီ တင်သွားပေးမယ်။ ဘာလို ့လဲဆိုတော့ ကျနော်လဲ စာမေးပွဲရှိတယ်ခင်ဗျ.
HTML ဆိုတာဘာလဲ ?
HTML ဆိုတာ Hyper Text Markup Language ဖြစ်ပြီး Internet ပေါ်မှာ အခြေခံအကျဆုံး ဘာသာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့English ဘာသာ အသုံးဝင်သလို HTML ဟာလဲ အခြေခံအကျဆုံးနဲ့အသုံးဝင်ဆုံး လူသုံးအများဆုံး ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
HTML ကိုလေ့လာဖို ့Software လိုလား ?
HTML ကိုလေ့လာဖို့Software မလိုပါဘူး window notepad ဒါမှမဟုတ် အခြား wordpad တစ်ခုခုဖြင့်လဲ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
HTML ကို စတင်လေ့လာမယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး HTML မှာ သုံးတဲ့ tag "< & > " တွေကို မှတ်သားရပါမယ်။ ပြီးတော့ / သူက HTML နဲ ့ရေးတဲ့ စာကြောင်းဆုံးကြောင်းကို ပြတာပါ။
အဲဒါတွေ ဘယ်မှာသုံးလဲ ဆိုတော့ HTML ကိုရေးသားတဲ့ နေရာ မှာ မပါမဖြစ် သုံးပါတယ်။
အဲဒါကို အောက်က သင်ခန်းစာတွေမှာ တွေ ့ပါလိမ့်မယ်
ကဲ... အဲဒါဆို ပထမဆုံး သင်ခန်းစာကို စမယ်
ကဲအဲဒါလေးကို notepad မှာ ရေးထည့်ပြီးတော့ File>Save as... ကို နှိပ်
File name မှာ First Lesson.html
Save as type မှာ All Files နဲ့save လိုက်ပါ။
အရေးကြီးတာက .html နဲ့ဆုံးဖို ့လိုတယ်နော်...
အဲဒါလေးကို ကြိုက်တဲ့ နေရာမှာ save ။
ပြီးရင် အဲဒီ ဖိုင်လေးကို သွားပြီးဖွင့်ကြည့်မယ်။
Hello World ဆိုတဲ့ စာလုံးနဲ ့စာမျက်နှာတစ်ခုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။
အဲဒါဆို ရင် သင့်ရဲ ့ပထမဆုံးသော HTML အသုံးပြုတဲ့ Webpage ကို တည်ဆောက်နိုင်သွားပါပြီ။
အဲဒီမြင်ရတဲ့ နေရာမှာ ဘယ်ဟာလေးတွေက ဘယ်ဟာကိုပေါ်လဲ ဆိုတာ သိထားသင့်ပါတယ်။
HTML စာမျက်နှာတစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင် <html> ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ ့စရပါတယ်။ အဲ... ဆုံးသွားပြီးဆိုရင် </html> နဲ့ပိတ်ရပါတယ်။
ပြီးတော့ HTML tag တစ်ခု ဆုံးတိုင်းကို / ဆိုတာလေး ထည့်ပေးရပါတယ်။ အဲဒါမှ အဲဒီ ကုတ်ရဲ့အဆုံးဟာ ဘယ်နားမှာ ဆုံးလဲဆိုတာကို သိမှာပါ (e.g <head> နဲ ့စထားပြီးရင် Header အပိုဒ်ဟာ </head> နဲ ့ဆုံးမှ ပြီးမှာပါ။ ကြားထဲမှာ မည်သည့် စာသားထည့်ထည့် မထည့်ထည့် ကိစ္စ မရှိပါဘူး။ )
ဒီနေရာမှာ <title></title> ဆိုတာဘာလဲလို ့မေးစရာရှိလာပါတယ်။ First Lesson လို ့ပေါ်တဲ့ နေရာဟာ Title ဖြစ်ပါတယ်။ <title>နဲ့</title> ကြားမှာ ထည့်သမျှဟာ အဲဒီနေရာမှာ အကျိုးသက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်
အဲဒါဆို <body> က ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ သူ က စာကိုယ်အပိုဒ် ဖြစ်ပါတယ်။ Body ထဲမှာ ထည့်တဲ့ စာမှန်သမျှ Hello World စာကြောင်းပေါ်တဲ့ စာမျက်နှာထဲမှာ ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲလိုပဲ.. Body အပိုဒ်ကို လဲ </body> နဲ ့ပဲ ဆုံးရပါတယ်။
အဲလောက်ဆိုရင် HTML ဟာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ ဆိုတာ နည်းနည်း ရေးရေးလေးတော့ ပေါ်လာလောက်ပါပြီ။
Last edited by ပိစိေလး on 21st February 2010, 5:45 pm; edited 1 time in total
22 လွယ်ကူလေ့လာသင်ခန်းစာ [Tutorial] on 21st February 2010, 5:30 pm
ကို ပိစိလေး အခုလို စပေးတာကျေးဇူးဗျာ။
ဒါပေမယ့် အပေါ်က ကျွန်တော့်ရဲ့ မာတိကာ ပုံစံအတိုင်းသွားရင် ပိုကောင်းမလားလို့?
23 လွယ်ကူလေ့လာသင်ခန်းစာ [Tutorial] on 21st February 2010, 5:48 pm
$ƴǩǾ wrote: ကို ပိစိလေး အခုလို စပေးတာကျေးဇူးဗျာ။
ဟုတ်ကဲ့ အကို ကျနော် နောက်ပြီးရင် ပြင်လိုက်ပါ့မယ် အခုတော့ အချိန်မရတော့ လို ့ပါ။
ကျနော်ကလဲ သင်ယူနေတဲ့ သူတစ်ယောက်သာဖြစ်လေတော့ perfect တော့ ဖြစ်ဖို ့မလွယ်ပါဘူး။
24 လွယ်ကူလေ့လာသင်ခန်းစာ [Tutorial] on 21st February 2010, 5:55 pm
ပြီးတော့ ကျနော် နည်းနည်း ဝေဖန်ချင်တယ်နော်... စိတ်ဆိုးရဘူး...
အကိုရဲ ့ခေါင်းစဉ်တွေက နည်းနည်း အသေးစိတ်လွန်းတယ်။ တစ်ချို ့ဟာတွေဆို ကျနော် မသိတာတွေ အများကြီးပါတယ်။
အကိုက HTML ကို Beginner တွေ အတွက် သင်မှာလား Experienced users တွေကို သင်မှာလား ?
25 လွယ်ကူလေ့လာသင်ခန်းစာ [Tutorial] on 22nd February 2010, 5:11 pm
ဟုတ်ကဲ့။ ၀င်ရေးပေးတာနဲ့တင် ကျေးဇူးတင်နေပါပြီ။
ကျွန်တော့် မာတိကာက အကုန်လုံး တွေအတွက်လေ။
Beginner အတွက်ဆိုရင်လည်း Foundation ခိုင်မှ ၊ Building ကောင်းကောင်း ရမယ် မှလား?
Pro အတွက်ဆိုရင်လည်း တစ်ချို့မေ့သွားတဲ့ Coding တွေဆို Reference ယူလို့ရအောင်ပေါ့?
ကျွန်တော် ပြောတာ လက်ခံမယ်ထင်ပါတယ်။
26 လွယ်ကူလေ့လာသင်ခန်းစာ [Tutorial] on 21st March 2010, 6:57 pm
-table အကျယ်အကျဉ်း ကိုတော့
<table width="your size">
-table နောက်ခံအရောင် ကိုတော့
<table bgcolor="your colour codes"></table>
-table နောက်ခံ ပုံ ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့
<table background="your image URL"></table>
-table အနားကွပ် ကိုတော့
<table border="your size"></table>
-အနားကွပ်ကို color ထည့်မယ်ဆို
<table bordercolor="your colour codes" ></table>
-အနားကွပ် လိုင်း အကျယ်အကျဉ်းကိုတော့
<table cellspacing="your size"></table>
-table ထဲ ကစာ နဲ့ table အနားကွပ်ဘောင် ကြားထဲက အကျယ်အကျဉ်းကိုတော့
<table cellpadding="your size"></table>
Rows နဲ့ Columns ခွဲမယ်
<table><td>your text here 1</td><td>your text here 2</td></table>
ဆိုတာ ဘေးဘက် columns တွေပွားတဲ့ရေးနည်းပါ
<table><tr><td>your text here </td></tr><tr><td>your text here 2</td></tr></table>
ဆိုတာ အောက်ဘက် rows တွေပွားတဲ့ရေးနည်းပါ
<table><tr>your text here 1</tr></table>
<table><th>your text here </th></table>
ဆိုတာ ခေါင်းစဉ် လိုမျိုး ရေးနည်းပါ
bgcolor="#000000" border="4" bordercolor="#FF0000" cellpadding="10" cellspacing="20" width="50%">
<th>I'm glad to be M.I.T.R member</th><th>I'm glad to be M.I.T.R member</th>
<tr><td>I'm glad to be M.I.T.R member</td><td>I'm glad to be M.I.T.R member</td></tr>
<tr><td>I'm glad to be M.I.T.R member</td><td>I'm glad to be M.I.T.R member</td></tr></table>
I'm glad to be M.I.T.R member
I'm glad to be M.I.T.R member I'm glad to be M.I.T.R member
ဒါကတော့ table အခြေခံရေးနည်းလေးတွေပါ
Last edited by TWO TWO on 27th March 2010, 2:23 pm; edited 1 time in total
27 လွယ်ကူလေ့လာသင်ခန်းစာ [Tutorial] on 22nd March 2010, 9:33 am
28 Re: လွယ်ကူလေ့လာသင်ခန်းစာ [Tutorial] on 22nd March 2010, 10:56 am
Try to use CSS or Ajax Technology(using Js or Jq) instead of Frame.
Frame is no longer use in Web 2.0
29 Re: လွယ်ကူလေ့လာသင်ခန်းစာ [Tutorial] on 22nd March 2010, 11:35 am
Hello Bro, TWO TWO.
Since MITR forum restricted HTML codes, You can use BBCodes to display your table like below.
I think you have faced this problems. So, you uploaded the Image of your table.
You can easily continue your tutorial now.
30 လွယ်ကူလေ့လာသင်ခန်းစာ [Tutorial] on 23rd March 2010, 11:41 am
ကျွန်တော် HTML နဲ့Site တစ်ခုရေးပြီးသွားပီ
အဲ့ဒီမှာစတာပဲ။အိမ်က laptop က 15လက်မ LCD လေ။
site ရဲ ့ပုံတွေ Frame တွေကတော့ ကွက်တိဘဲ
Frame တွေ Table တွေ ကတလွဲတွေဖြစ်နေသဗျ
ီ :cry :cry
31 လွယ်ကူလေ့လာသင်ခန်းစာ [Tutorial] on 27th March 2010, 10:18 am
့html မှာ ကိုယ့် Site ရဲ့Search box ထဲ့ချင်လို ့။။...ဘယ်လိုများလုပ်ရ :cry :cry
32 Re: လွယ်ကူလေ့လာသင်ခန်းစာ [Tutorial] on 27th March 2010, 2:35 pm
Oprea wrote: Hello Bro, TWO TWO
bro Opera ! (အိုပါး )
I've already click on thank button
33 Re: လွယ်ကူလေ့လာသင်ခန်းစာ [Tutorial] on 1st April 2010, 2:49 pm
Nyein Chan Su HLaing
Can u write about of HTML version 5.Please I want to learn it.To self-study ,can u give the links of the E-books.
34 လွယ်ကူလေ့လာသင်ခန်းစာ [Tutorial] on 5th April 2010, 7:52 pm
zawmin wrote: ကျွန်တော် HTML နဲ့Site တစ်ခုရေးပြီးသွားပီ
အဲဒါက တော်တော်များများဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ပြသနာပါ။ (ကျွန်တော်တောင် ဖြစ်တယ်။ )
CSS နဲ့ Fix လုပ်လို့ရပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ ကျောင်းစာတွေ ခေါင်းထဲရောနေလို့ ၊ ပြန်ထုတ်ပြီး ၊ CSS & HTML ကို ပြန်ထည့်လာခဲ့မှဘဲ ပြောပြတော့မယ်။
zawmin wrote: ့html မှာ ကိုယ့် Site ရဲ့Search box ထဲ့ချင်လို ့။။...ဘယ်လိုများလုပ်ရ :cry :cry
Form ပိုင်း ကျွမ်းကျင်မယ်ဆိုရင် ရပါလိမ့်မယ်။
TWO TWO wrote:
ဟိဟိ။ Opera ကို ကျေးဇူးတင်ရင် အနော့်ကို လည်းကျေးဇူးတင်။
Nyein Chan Su HLaing wrote: Can u write about of HTML version 5.Please I want to learn it.To self-study ,can u give the links of the E-books.
အဲ့။ HTML တတ်ချင်တာလား??? ဒါမှမဟုတ်5ရဲ့ Feature တွေဘဲသိချင်တာလား။
HTML5ဆိုတာ တကယ်တော့ Version ပါ။ အတည်တကျတောင် ထွက်သေးဘူး။
သူ့ရဲ့ Feature တွေ သိချင်ရင်တော့ CSS3လိုဘဲ ကြည့်လို့ရမယ်။
HTML ကို မသိသေးဘဲ ခုမှ တတ်ချင်တာဆိုရင်တော့ ရိုးရိုး E-Book တွေဘဲ ဖတ်လို့ရပါတယ်။5ဖတ်မှ ခေတ်မှီတာဟုတ်ပါဘူး။
35 Re: လွယ်ကူလေ့လာသင်ခန်းစာ [Tutorial] on 6th April 2010, 8:35 am
NO i want to know the features of 5. Thanks for your idea.
36 Re: လွယ်ကူလေ့လာသင်ခန်းစာ [Tutorial] on 6th April 2010, 7:31 pm
You can cheek here
Actually you need to find it your self. It is just simple, Go to Google >> Write Down "HTML 5". You will get everything you want.
If you didn't get what you need, Search and Search again.
Finally you will get the Answer you want.
And if you have found what you want, share it here.
If you can't find what you want even you search again and again, Ask it here.
Ahh, this is just my suggestion naw. Don't misunderstand.
This can really "improve" your skill.
Try that Idea and Change your learning style, you will thank me when you got success.
37 လွယ်ကူလေ့လာသင်ခန်းစာ [Tutorial] on 18th May 2010, 4:07 pm
html ဆိုရင် ကျနော်လညး်ဝင်ရေးမယ်ဗျာ
နောက်တစ်ပတ် လောက်ကျရင် စာအုပ်နဲ့စပြီးဆွေးနွေးကြမယ်
အခုပထမဆုံး Html Language အခြေခံ tab တွေနဲ့စကြမယ်
38 လွယ်ကူလေ့လာသင်ခန်းစာ [Tutorial] on 18th May 2010, 4:46 pm
preview ကိုကလစ်မိတာ ပျက်သွားတယ်
39 လွယ်ကူလေ့လာသင်ခန်းစာ [Tutorial] on 18th May 2010, 4:49 pm
1. မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ်စာ လေးတွေ ပေါ်ချင်ရင်
ရိုက်ချင်တဲ့စာကို text နေရာမှာထည့်ရိုက်ပါ။
40 Re: လွယ်ကူလေ့လာသင်ခန်းစာ [Tutorial] on 18th May 2010, 8:41 pm
<marquee direction="right"><marquee behavior='alternate'><marquee width='150'><font color='#000000' size='2'><blink>my text</blink></font></marquee></marquee></marquee>
cool marquee !!
41 လွယ်ကူလေ့လာသင်ခန်းစာ [Tutorial] on 18th May 2010, 9:01 pm
ပြီးတော့ ကျွန်တော် တစ်ခုအကြံပြုချင်တာက ၊ ကျွန်တော်လည်း ဒီ Topic ကို အစအဆုံးရေးဖို့ မစနိုင်သေးပေမယ့် ၊ ရေးနိုင်တဲ့သူတွေက စနစ်တကျ ရေးကြရင် မကောင်းဘူးလား..
ခုထိ ၂ မျက်နှာသာကူးလာတယ် ၊ ဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့ ဖြစ်နေတယ်။ ရေးပေးတဲ့သူတွေကို ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ပြောသလိုဘဲ အပေါ်က မာတိကာမျိုး စနစ်တကျ ရေးကြရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်...
42 လွယ်ကူလေ့လာသင်ခန်းစာ [Tutorial] on 20th May 2010, 2:33 pm
ကျွန်တော် လည်း chan.virus က blink တွေရေးနေပြီ.. marquee tutorial ဆက်တော့မယ်ထင်ပြီး
တကယ်ဆို ညီလေး $ƴǩǾ ပြောသလိုမျိုး မာတိကာလေးနဲ့ စနစ်တကျရေးသွားမယ်ဆိုရင်ဖတ်ရတဲ့သူရော
(ပြောသာပြောတယ်..ကိုယ်တိုင် HTML tutorial တွေရေးရမှာ.. ခက်တော့ခက်သား..
စိတ်ထဲရှိတာပြောရရင်... သူများရေးတာကိုများများဖတ်ချင်တာဗျ.. ဟဲ)
43 လွယ်ကူလေ့လာသင်ခန်းစာ [Tutorial] on 11th July 2010, 7:25 pm
ဟုတ်ပါတယ် အဲလိုစနစ်တကျလေး ၀ုိင်းရေးရင် တကယ်ကောင်းမှာပဲ
44 လွယ်ကူလေ့လာသင်ခန်းစာ [Tutorial] on 11th July 2010, 7:39 pm
အနော်လည်း သိသလောက် ၀င်ဖြီးမယ်လေ ရတယ်ဟုတ်
45 လွယ်ကူလေ့လာသင်ခန်းစာ [Tutorial] on 12th July 2010, 9:08 am
ဆောရီး ဆိုက်ကို ရေး ငါက လောကြီးသွားတယ်
ငါ လည် အခု ပြန်ဖတ်နေပြီးကွ HTML ကို မင်းရေး ရင် ငါလည် သိသလောက် ၀င်ဆွေးနွေးလို့ ရအောင်လိုကွာနော် ငါ့ပြောတာကို အဲ့ဒီလို သဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူး
46 လွယ်ကူလေ့လာသင်ခန်းစာ [Tutorial] on 12th July 2010, 7:47 pm
ဒါနဲ့ link ကို html မှာ ဘယ်လို့ Hide လုပ်လို့ရနိုင်မလဲ ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက
အဲလိုဆိုရင် gmail ဆိုပေမယ့် Google ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ် ကျွန်တော်က ဒါကို အခြားကို redirect ပြန်လုပ်ချင်လို့
47 လွယ်ကူလေ့လာသင်ခန်းစာ [Tutorial] on 15th July 2010, 9:47 pm
ကွျွန်တော် google redirect အတု ကိုတော့ ဒီလိုလုပ်တယ်ဗျ
ဥပမာ ကျွန်တော်သွားမယ့်ဆိုက် က
<a href="http://www.google.com/url?q=http://facebook.com&ei=0Sw_TM3SJMemngeYwsjwBA&sa=X&oi=unauthorizedredirect&ct=targetlink&ust=1279210457602566&usg=AFQjCNG-msHk12zioNWWWzEZQKIDwlH6TA"> http://google.com </a>
ဒါဆို redirect က facebook ကိုရောက်သွားမယ် ဗျ....
48 လွယ်ကူလေ့လာသင်ခန်းစာ [Tutorial] on 8th August 2010, 2:16 pm
49 လွယ်ကူလေ့လာသင်ခန်းစာ [Tutorial] on 25th June 2011, 6:06 pm
ကိုတူးတူးပြောတာ ဆင်သလိုပါပဲ့ ဒါပေမယ့်
ကျွန်တော်က Google link ကို mouse တင်လိုက်တာနဲ့ အောက်က status မှာလည်း google ပေါ်နေမယ်
ဒါပေမယ့့် Link ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ အခြား page တစ်ခုရောက်သွားမယ် အဲဒါပြောတာ
50 လွယ်ကူလေ့လာသင်ခန်းစာ [Tutorial] on 3rd July 2011, 9:57 pm
www.facebook.com" target="_blank" rel="nofollow">www.google.com <== နှိပ်ကြည့်လို့ရတယ်
google ရဲ့ redirect vul လေးသုံးပြီးလုပ်ထားတာပါ
google က ပြင်မှာ မဟုတ်ဘူး.. ဆက်ရှိနေလိမ့်မယ်
ဒါပေမယ့်သူ့ search ပေါ်မှာ ရှိတဲံစာမျက်နှာတွေပဲရတာဗျ
51 Re: လွယ်ကူလေ့လာသင်ခန်းစာ [Tutorial]